March 2021 - Puntland Mirror Believable Media Website
March 29, 2021 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxda Dowladdaha Xubnaha ka ah Federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Isniin ah kulan Muqdisho kula yeeshay xubno ka socda beesha caalamka. Intii kulanku uu socday, waxaa looga hadlay sidii xal looga gaari lahaa […]
March 27, 2021 Abdi Omar Bile 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Kulan u dhaxeeya madaxda Dowladdaha Xubnaha ka ah Federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Sabti ah ka furmay magaalada Muqdisho. Kulanka ayaa looga hadlayaa xaalada dalka gaar ahaan ismari-waaga ka taagan doorashada, sida lagu […]
March 24, 2021 Abdi Omar Bile 0
Kismaayo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa xilka ka qaaday wasiirkiisii amniga Cabdirashiid Xassan Cabdinuur oo loo yaqaan “Janan” kadib markii uu hehiis la galay Dowladda Federaalka Soomaaliya. Janan oo ciidamo uu wato dhowr […]
March 15, 2021 Abdi Omar Bile 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Soomaaliya ayaa maanta oo Isniin ah heshay 300,000 xabo oo talaalka COVID-19 ah, sida ay sheegaty Wasaaradda Caafimaadka. Talaalka oo noociisu yahay Oxford-AstraZeneca ayaa ah qeybtii ugu horeysay oo soo gaarta dalka kuyaala […]
March 10, 2021 Abdi Omar Bile 0
Boosaaso-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullahi Deni ayaa shaqo joojin ku sameeyay duqa degmada Boosaaso Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan sababo la xiriira eedaymo musuqmaasuq, sida lagu sheegay digreeto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha fiidnimadii Talaadada. Gu […]
March 8, 2021 Abdi Omar Bile 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wefdi uu hoggaaminayo Raysulwasaare Ku Xigeenka Dowladda Federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo Soomaaliya ku metelaya dhageysiga dacwada kala dhaxeysa Kenya ayaa maanta oo Isniin ah u safray magaalada Hague ee dalka Netherlands […]